SHOPPING : LA BOUTIQUE "EKA" - TVMADA - RADIOMADA
TVMADA - RADIOMADA > ENTREPRISE > SHOPPING :
Mbola manamarika ny malagasy ny fahaizany mikirakira sy mampiasa ny zavatra eo am-pelatanany, izany hoe ny fitaovana entiny miainga dia matetika heverina hoe toa zavatra tsy dia manao ahoana akory kanefa dia hahavitàny zavatra tsy ampoizina mihitsy. Tsy vitsy ireo mpanatalenta malagasy na « artisan » no maka ireny akora efa niasa ireny, ireny ambina akora izay efa nampiasaina no haodina, dia haverina haodina indray ary hahafahana mamorona zavatra iray tena mahafinaritra tokoa.
Anisan’izany ohatra ity botika iray eo Antaninarenina ; toerana misy ireo karazan-javatra vita malagasy fanao fahatsiarovana, misy ihany koa ieo fanaka vita amin’ny karazana hazo sarobidy isan-karazany, ny sotro, forsety, antsy,sns….
Niantomboka tamin’ny alalan’ny fiompiana tantely izy ity ary niafara tamin’ny fananganana ity Botika ity. Hita ao avokoa rehefa fanao fahatsiarovana toy ny “Porte-clés”, ny “Peluche”, ny fiara kely vita amin’ny kapoaka”, sns…. Fa indrindra ireo karazana kilalao izay fanao matetika toy ny daomy, ny scrabble, ireo paoketra isan-karazany na vita amin’ny hoditra na amin’ny rofia, ny fakan-kazo, ny fanaka, ny haingon-trano rehetra dia hita ato amin’ity Botika ity avokoa. NY tantely moa dia efa mivarotra izany izy ireo.
Manoloana ity fihariana ity dia mitaraina ny mpitantana ity Botika ity ary manao antso avo amin’ny tompon’andraikim-panjakana mba hanamorana ny fitrandrahana ny akora dia ny hazo sarobidy izany, izay havadika ho fanaka, satria dia misy foana ny fahasahiranana eo amin’ny fitrandrahana izy ity anefa ireo vahiny tonga eto Madagasikara dia toa tsy tojo izay olana izay akory.
BOUTIQUE « EKA »
Lot 226 – Antaninarena
8, Rue Général Rabehevitra
Tel Madagascar : +261 (0) 34 10 251 12